उत्तर कोरियामा ११ दिन जन्मदिन मनाउन र कसैको मृ’त्यु भएमा रुन नपाईने ! – Patrika Nepal
उत्तर कोरियामा ११ दिन जन्मदिन मनाउन र कसैको मृ’त्यु भएमा रुन नपाईने !
पुष ६, २०७८ मंगलबार 65
उत्तर कोरियाका पूर्वनेता तथा किम जोङ उनका पिता किम जोङ इलको १०औं पुण्यतिथिमा ११ दिन राष्ट्रिय शोक मनाउने घोषणा गरिएको छ ।
शुक्रबार उत्तर कोरियाले शोक मनाउने घोषणा गर्दै आफ्ना नागरिकलाई ११ दिन हाँस्न, मदिरा सेवन गर्न र किनमेल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो । उत्तर कोरियाली सरकारी समाचार संस्था केसीएनएका अनुसार किम जोङ इलको सम्मानमा पूरा देश उनलाई शान्त श्रद्धाञ्जली दिनेछ । यस अवधिमा गाडी र रेललाई हर्न बजाउन पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
त्यस्तै यो ११ दिनको बीचमा कुनै पनि घरमा कसैको मृत्यु भएमा रुन पनि अनुमति छैन । त्यस्तै शोक अवधि सकिएपछि अर्थात ११ दिनपछि मात्र घरबाट शव निकाल्न निर्देशन दिइएको पनि बताइएको छ । त्यस्तै यही अवधिमा कसैको जन्मदिन परेमा पनि मनाउन पाइने छैन ।
डिसेम्बर १७ तारिख दिउँसो पूरै देशमा एकसाथ साइरन बजाइएको थियो र सम्पूर्ण नागरिक कुमसुसान प्यालेसतर्फ फर्किएर तीन मिनेट नेता किमलाई श्रद्धाञ्जली दिएका थिए ।
किम जोङ इलको मृत्यु सन् २०११ डिसेम्बर १७ मा भएको थियो । दुई दिनसम्म उनको मृत्युका बारेमा कुनै जानकारी सार्वजनिक गरिएको थिएन । दुई दिनपछि सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत उनको मृत्यु भएको घोषणा गरिएको थियो । किम जोङ इल उत्तर कोरियामा शासन गर्ने किम वंशका दोस्रो व्यक्ति हुन् । उनले उत्तर कोरियामा १७ वर्ष शासन गरेका थिए ।
PrevRIP बैंककै बाथरुममा किन गइन् अनुपमा ? कसरी भयो रहस्यमय मृत्यु !😭😭🙏🙏 जति बिजी भएपनि कृपया केहि मिनेट समय दिएर पढ्नुहोला,यति दु,खदाइ अबस्थामा कसको के लाग्छ र ?
Nextआमाले पाप लुकाउन १ दिनकी बालिका फालिन, कुकुरले रातभर छोपेर बचायो ज्यान
ड्रयागन फ्रुट्समा कोरोना देखिएपछि खैलाबैला, अधिकांश बजार समेत बन्द गरियो
मकै र कोदो फल्ने बारीमा १२ सय बोट सुन्तला खेती गरेर चार करोडको सुन्तला विक्री गरे तनहुँका किसानले
दुधे बालक च्या’पेर ठेलामा तरकारी बेच्ने भाइरल दिदीको दुनिया रु’वाउने कहानी, भुडी बोकाएर श्रीमान फ’रार(भिडियो)